မိုင်းဖုန်းဆရာတော် တည်ထားသည့် လွိုင်ဆမ်ဆစ် ဆုတောင်းပြည့် မင်္ဂလာစုမ့်မိုင်း စေတီတော်မြတ် ရေ - Yangon Media Group
မိုင်းဖုန်းဆရာတော် တည်ထားသည့် လွိုင်ဆမ်ဆစ် ဆုတောင်းပြည့် မင်္ဂလာစုမ့်မိုင်း စေတီတော်မြတ် ရေ
ကွတ်ခိုင်၊ ဇူလိုင် ၂၈
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) မူဆယ်ခရိုင် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်မှ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၆၁၂၅ ပေအမြင့်ရှိ လွိုင်ဆမ်ဆစ်တောင်ပေါ်တွင် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်တည်ထားသည့် လွိုင်ဆမ်ဆစ်ဆုတောင်းပြည့်မင်္ဂလာ စုမ့်မိုင်းစေတီတော်မြတ်၏ ရွှေထီး တော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ စိန်ဖူး တော်တင်လှူပွဲကို ဆရာတော်များနှင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ တိုင်း ရင်းသားပေါင်းစုံဖြင့် ဇူလိုင် ၂၇ ရက် ဝါဆိုလပြည့်နေ့က စည်ကားစွာကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စေတီတော် ရွှေထီးတော်တင် လှူပွဲသို့ မူဆယ်မြို့ လွိုင်တိန်ခမ်း ကျောင်းတိုက်မှ တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မ ဌာနာစရိယဘဒ္ဒန္တသုခမိန္ဒ(MA) နှင့် နမ့်လန်ဆရာတော် မဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇဘဒ္ဒန္တဥာဏောဘာသ ဦးဆောင်ဆရာတော် သံဃာတော်များကြွရောက်၍ ရွှေထီး တော်၊ ငှက်မြတ်နားတော်၊ စိန်ဖူး တော်တို့ကို တင်လှူပူဇော်ပေးတော် မူခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစေတီတော် ရွှေထီး တော်တင်လှူသည့် ဝါဆိုလပြည့် နေ့တွင် မိုးများရွာသွန်းနေသော်လည်း အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှ ရွှေထီးတော်တင်လှူပွဲသို့ လာရောက် ကြသည့်ပရိသတ်များအထူးများ ပြားခဲ့ရာ ဒေသခံများနှင့် အလှူရှင်များက နိဗ္ဗာန်ဈေးဖွင့်၍ စားစရာများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ သောက်ရေ သန့်များနှင့် တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ကို လှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။
ရွှေထီးတော်တင်ပွဲသို့ လာ ရောက်ကြသူများပြား၍ မန္တလေး- လားရှိုး-မူဆယ်၊ ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးတွင် ယာဉ်ကြော ပိတ်ဆို့မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရ၍ ဘုရား ဂေါပကအဖွဲ့များနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ရှင်းလင်းဆောင်ရွက်ပေးကြသဖြင့် ည ၈ နာရီခွဲတွင် အဆင်း ယာဉ်များကို စတင်စေလွှတ်နိုင်ခဲ့ ပြီး ယာဉ်ကြောလမ်းကြောင်းရှင်း လင်းရေးအတွက် အတက်အဆင်းယာဉ်များကို ဇူလိုင် ၂၈ ရက် နံနက် ပိုင်းအထိ စနစ်တကျဆောင်ရွက် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ညောင်ဦးမြို့နယ်တွင် တောင်သူများ နှစ်ရှည်ပင်အဖြစ် လျှော်ဖြူပင်ကို စိုက်ပျိုးရန် စိတ်ဝင်စ?
ဘီးလင်းမြို့နယ် အတွင်း ပိတ်မိယာဉ်များ လာရာလမ်းအတိုင်း လှည့်ပြန် ကုန်တင်ယာဉ် အများစုသာ ရေက??
ဗြိတိန်နှင့် အီးယူက ဘရက်ဆစ် သဘောတူညီမှု ဥပဒေမူကြမ်းကို သဘောတူညီမှုပြု
အသစ်ဝင်လာမည့် ဆရာဝန်များကို အစိုးရဆေးရုံများတွင် နှစ်နှစ် သို့မဟုတ် သုံးနှစ် တာဝန် ထမ်းဆေ??
အလှမယ်ဇွန်သံစဉ် Miss Universe 2017 ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တ